Soo Dhawaynta Pro.Axmed Ismacil Samatar Oo Meeqaam Sare Oo Soo Dhawayn Ah Loo Diyaariyay | Salaan Media
Soo Dhawaynta Pro.Axmed Ismacil Samatar Oo Meeqaam Sare Oo Soo Dhawayn Ah Loo Diyaariyay
Hargeysa(SM) Xukuumadda Somaliland ayaa guddi heer qaran ah u saartay soo dhaweynta Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan u dhashay Somaliland oo lagu wado in uu dalka yimaado maalinta Axada ah ee todobaadkan.
sida uu warbaahinta u sheegay Wasiirka Kalluumaysiga iyo Khayraadka baddaha ee Somaliland C/laahi Jaamac Cismaan (Geeljire) oo ka mid ah guddida ay xukuumadu u saartay soo dhawaynta Prof. Samatar, oo xalay telefoonka war kooban oo arrintaasi la xidhiidha ku siiyay.
Wasiir Geeljire waxa uu sheegay in ay jiraan guddi aqoonyahano ah oo isku xil saaray soo dhawaynta aqoonyahan Axmed Ismaaciil Samatar isla markaana ay wada shaqaynayaan guddidasi is xilqaantay iyo guddida ay xukuumadu u xilsaartay. “Axmed Ismaaciil Samatar wuxuu dalka imanayaa maalinta Axada ee 2-da bishan June, waxaanu ka soo degaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera, iyada oo xukuumada Somaliland na ugu talogashay inay ku soo dhawayso baratagool iyo hab maamuus sare, maadaama oo ay xukuumadu casuuntay.
waxa kale oo jirta guddi aqoonyahano ah oo isku xilsaaray soo dhawaynta Prof. Samatar kuwaasi oo istiikaro iyo boodhadh lagu soo dhawaynayo ku dhejiyay shaarciyada caasimada” ayuu yidhi wasiir Geel jire. C/laahi Jaamac Cismaan (Geeljire) waxa kale oo uu tilmaamay in Prof. Samater marka uu ka soo dego magaalada Berbera diyaarad lagaga soo qaadi doono, taasi oo keeni doonta Hargeysa isla markaana uu isagu xubin ka yahay guddida ay xukuumadu u saartay soo dhawayntiisa, waxaanu yidhi “anigu waxan ka mid ahay xubnaha guddida ah ee ay xukuumadu u xilsaartay soo dhawaynta oo la shaqaynaya guddida aqoonyahamiinta ah ee is xilqaamay.
Isku soo wada duuboo soo dhawaynta Prof. Axmed Ismaaciil Samater ayaa si aad ah looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somalialnd gaar ahaana caasimada Hargeysa, iyada oo boodhadh ay ku qoran yihiin halku dhegyo lagu soo dhawaynayo lagu dhejiyay shaarciyada caasimadda.